Igbo, John: Lesson 063 - Ndị Juu na-ajụ nwoke ahụ a gwọrọ ajụjụ (Jọn 9:13-34) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 063 (The Jews interrogate the healed man)
2. Agwọ ọrịa onye nwoke ahụ kpuru ìsì (Jọn 9:1-41)
b) Ndị Juu na-ajụ nwoke ahụ a gwọrọ ajụjụ (Jọn 9:13-34)
13 Ha kpọtara onye ahụ kpuru ìsì n'ihu ndị Farisii. 14 Ọ bụ ụbọchị izu ike mgbe Jizọs mere apịtị ma meghee anya ya. 15 Ya mere ndi-Farisi we jua Ya ọzọ, si, Otù onye mara uzọ-Ya. Ọ gwara ha, sị, "O tinyere ụrọ n'anya m, asa m, m wee hụ."
Ndụ ndị Juu bụ ụlọ mkpọrọ nke ụkpụrụ iwu; ha na-eche banyere nchebe izu ike karịa ọṅụ nke ịgwọ ọrịa. Ndị agbata obi na ndị nledo kpọtara ndị Farisii ahụ gwọrọ ka ha kpebie ma ọgwụgwọ ọ bụ sitere n'aka Chineke ma ọ bụ site n'aka ndị ọrụ Setan.Ya mere amalitere ajụjụ na mkparịta ụka banyere Jizọs. Nwa okorobịa ahụ a gwọrọ kọwara otú agwọ ahụ si mee. O mere ka okwu ya dị mkpirikpi dịka ọṅụ ya na ọgwụgwọ nke iro ndị iro Jizọs kpaliri.
16 Ya mere ufọdu nime ndi-Farisi siri, Nwoke a esiteghi n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọ dighi-edebe ubọchi-izu-ike. Ndi ọzọ nāsi, Gini mere nwoke nke nēmehie nēme ihe-iriba-ama di otú a? Ya mere ha juru onye-ìsì ahu ọzọ, si, Gini bu okwu bayere ya, n'ihi na o meghere anya-gi? Ọ si, Onye-amuma ka ọ bu.
Mgbe ha nụsịrị àmà ya, ndị na-ede iwu malitere ịlụ ụka. Žf] d kwuru na Jizos enweghi ike site n'ebe Chineke ni n'ihi na o mebiri iwu Chineke. Ha si otú ahụ kpee Jizọs ikpe site n'echiche nke iwu.
Ndị ọzọ hụrụ njikọ dị n'etiti mmehie nwoke kpuru ìsì na ọgwụgwọ na mgbaghara ya. Ha kwuru na ngwọ ọrịa ga-enwe mmetụta dị omimi karị, n'ihi na ọ na-emetụta ikike ịgbaghara Chineke. Ya mere, obu ihe puru ime Jisos ka obu onye nmehie n'ihi na o gbaghaara nmehie ma kpezie ihe kpatara nsogbu ahu.
Ndị abụọ ahụ enweghị ike ịchọta nkwenye. Ndị nke abụọ ahụ kpuru ìsì, dị ka ọtụtụ ndị n'oge anyị na-atụle Jizọs n'ụzọ dị ala na enweghị isi. Mgbe ahụ, ha jụrụ nwoke ahụ a gwọrọ ka ọ chọpụta ma Jizọs ekwuru ihe ọ bụla ọzọ, gịnịkwa ka o chere banyere Jizọs. Ajụjụ ndị dị otú a bara uru maka ndị na-ama ihe banyere Jizọs; ọ dị mma ịjụ ndị a mụrụ ọzọ, n'ihi na ha maara otú a ga-esi hapụ mmehie na iwe Chineke. Ewezuga omumu ime mmuo ayi ayi apugh ihu Chineke.
Nwoke ahụ a gwọrọ wee malite iche echiche, "Ònye bụ Jizọs?" O jiri Jisos tụnyere ndi nke Chineke na akuko ndi nke ya. N'oge ọgbọ ahụ mere ọtụtụ ọrụ ebube, ma ọ dịghị onye ọ bụla gwọrọ nwoke a kpuru ìsì. Site na omume Jizọs, onye ọ bụla na-eche echiche nwere ike ịhụ na ebe a bụ onye nzọpụta pụrụ iche. Ya mere, nwoke a kpọrọ Jisos onye amụma, onye na-amataghi ọdịnihu kama ọ na-ekpebi ugbu a na ike Chineke. Ọ na-enyocha obi ma na-egosipụta uche Chineke.
18 Ya mere, ndị Juu ekweghị banyere ya, na ọ kpuru ìsì, ha enwetakwa anya ya, ruo mgbe ha kpọrọ ndị mụrụ nna ya, bụ ndị natara ụzọ, 19 wee jụọ ha, sị: "Ọ bụ nwa unu a, onye unu kwuru na ọ bụ? mụrụ kpuru ìsì? Olee otú o si hụ ugbu a? "20 Ndị mụrụ ya zara ha, sị:" Anyị maara na onye a bụ nwa anyị, nakwa na a mụrụ ya kpuru ìsì; 21 ma otú ọ dị ugbu a, anyị amaghị; ma ọ bụ onye meghere anya ya, anyị amaghị. Ọ dị afọ. Jụọ ya. Ọ ga-ekwu okwu maka onwe ya. "22 Ndị mụrụ ya kwuru ihe ndị a n'ihi na ha tụrụ ndị Juu egwu; n'ihi na ndị Juu ekwenyeworị na ọ bụrụ na mmadụ ọ bụla ekwupụta na ya bụ Kraịst, a ga-achụpụ ya n'ụlọ nzukọ. 23 Ya mere ndị mụrụ ya kwuru, sị, "O meela agadi. Jụọ ya."
Ndị Juu jụrụ ikweta na Baịbụl nke atụnyere agadi nkwa’ ọrụ ebube na Chineke na ọrụ nke Kraịst, ka ndị dị ebube. Ha ekwenyeghi na ya bu onye amuma ma obu Chineke zitere otu, ma oburu na ha enwegh ike ime ihe kwesiri ntukwasi obi.
Ha dabere na ngwongwo nke mere na ọrụ ebube ahụ bụ ịgha ụgha nakwa na nwoke ahụ anọghị ìsì. Ha dị njikere ikwu na ọ gaghị ekwe omume ịkọwapụta ọrụ nke ọrụ ebube na aka Jizọs. Iji gwọọ onye kpuru ìsì ka ọ bụ ihe na-apụghị imere ha, nsogbu nke na-akpata mmehie.
A kpọtara nne na nna ahụ bụ ndị nụrụ banyere nsogbu nwa ha na ndị uweojii. Ndị nne na nna a ji nlezianya kwuo okwu n'ihi egwu ndị Farisii, ma gọnahụ ihe ha nụrụ na nwa ha. Ha hapụrụ ya, ka ha wee ghara itinye aka na nsogbu ahụ. N'ihi ya, ọ bụ naanị nwa ya ka ọ hapụrụ. Nchụpụ sitere na Kansụl bụ ihe dị egwu; ọ pụtara ịhapụ ndị mmadụ dị ka onye ekpenta. Ọ pụtakwara ịjụ ikike na ohere ịlụ di. Ikpo ndi Ju banyere Jisos abiawo na ha choro ikpochapu ndi neso uzo.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka na ị bụ ikike Chineke mere anụ ahụ. Debe anyị n'oge awa nke ikpe ka ị ghara ịrapara na nchekwa na nkasi obi karịa gị. Na-edu anyị ka anyị gọnahụ onwe anyị na iji obi ike na iguzosi ike n'ihe, ịhọrọ ọnwụ karịa ịhapụ ma ọ bụ gbaghara gị.
Gịnị mere ndị Juu ji jụ ịgwọ onye nwoke kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)